भुटानी फिल्मबाट नेपालले के सिक्ने : उगेन छोदेनसँग संवाद
By soniya on	 22nd May 2019 Highlights, अन्तर्वार्ता, समाचार
भुटानी फिल्म निर्मात्री एवं अभिनेत्री उगेन छोदेन अहिले नेपाली राजधानीमा छिन् । नेपाल भ्रमणमा आएकी यी सुन्दरी हालैको एक दिउँसो मूभिमान्डुसँग गफिइन् । उनको कुरा सुन्दा लाग्यो, नेपाली र भुटानी फिल्म उद्योगबीच एकसय असी डिग्री भिन्नता छ । फिल्म बनाउन भुटानमा सरकारले ऋण दिन्छ । लगानी उठ्ने शतप्रतिशत पक्का । फिल्म बनाउनेलाई राजपरिवारबाट माया । हलिउड–बलिउड भुटानमा रिलिज हुँदैनन् । सरकारले जोङ्खा भाषालाई फिल्म–मेकिङको माध्यमको रुपमा अनिवार्य गरेको छ । उनीसँग मूभिमान्डु सम्पादक विष्णु शर्माले गरेको संक्षिप्त संवाद :
किन तपाइँलाई फिल्म बनाउन मन लाग्छ ?
मुख्य उद्देश्य संस्कृति र परम्परा जोगाउनु हो । अभिनेत्रीको रुपमा फिल्ममा आउँदा कसैले मलाई चिन्ने थिएनन् । तर, आफै फिल्म बनाउँदा नाम, पहिचान र नाफा एकैसाथ मिल्छ । फिल्म बनाउँदा हाम्रो राजपरिवारले पनि माया गर्छ । सरकारले ऋण दिन्छ र संचार मन्त्रालयले उत्कृष्ट राष्ट्रिय भाषाको अवार्ड दिन्छ । यसकारण मलाई फिल्म बनाउन उत्साह थपेको छ । मेरो पहिलो फिल्मले पनि अवार्ड पायो । भुटानमा यी कुराले फिल्म निर्मातालाई प्रेरणा दिन्छ ।
प्रायः भुटानी फिल्मको कथावस्तु के हुने गर्छ ?
सन् १९८९ मा पहिलोपटक बौद्ध फिल्म बनेको इतिहास छ भुटानमा । त्यतिबेला हलिउड र बलिउडको पनि ठूलै प्रभाव थियो । अहिले नेपालमा भएजस्तो । म सानै हुँदा पनि राजेश हमालको फिल्म भुटानमा हेरेको थिएँ । केही रंगमंचका कलाकार मिलेर त्यतिबेला एउटा बौद्ध फिल्म बनाए । मान्छेहरुलाई रुचि लाग्न थाल्यो । अहिले पनि हाम्रा फिल्म बलिउड संरचनामा हुन्छन् तर, त्यसभित्र हाम्रै संस्कृति समेटिन्छ । हरर, कमेडी, रोमान्टिक, सोसल बेस्ड फिल्म बन्छन् भुटानमा । दर्शकको रुचि हेरेर फिल्म बनाइन्छ ।
कस्तो जनरका फिल्म भुटानी दर्शकलाई मनपर्छ ?
कसैलाई कल्चरल मनपर्छ । कसैलाई कमिक अनि लभ–रोमान्टिक । यदि तपाईंको स्क्रिप्ट दामी छ र एक्टर्ज चर्चित छ भने दर्शक हेर्न आउँछन् । तर, नयाँ एक्टर्ज छन् भने नचल्न सक्छ । नचले पनि फिल्मको लगानी चाहिँ मजाले उठ्छ । बढी चाहिँ रोमान्टिक र कमिक फिल्म व्यवसायिकरुपमा चल्ने गर्छन् । म फिल्ममा भाग्य चाहिन्छ भन्नेमा पनि विश्वास गर्छु । लगानी बढी हुँदैमा चल्ने होइन, भाग्य पनि हुनुपर्छ ।
अहिलेको ग्लोबल युगमा विदेशी फिल्म भुटानमा रिलिज नहुनुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
व्यक्तिगतरुपमा मलाई हलिउड–बलिउड रिलिज भएको मनपर्दैन । किनभने फिल्म–मेकर र नागरिकको रुपमा त्यस्तो लाग्छ । नेपालमा कुन फिल्म रिलिज भयो, कलाकार को हो ? कथावस्तु के हो ? थाहा नै छैन । किन यस्तो हुँदैछ । हलिउड–बलिउडको प्रभाव रैछ नेपालमा । हाम्रो भुटानमा चाहिँ एउटा फिल्म २ देखि ३ महिनासम्म चल्छ । कलाकारले नाम पाउँछन् र निर्माताले पैसा । पहिले पनि भुटानमा नेपालजस्तै थियो हलिउड–बलिउडको प्रभाव । भुटानी तन्नेरी अहिले पनि विदेशी फिल्मलाई युट्युवमा र घरको फिल्मलाई हलमा हेर्छन् । जसले गर्दा विदेशले हामीलाई दमन गर्छ सक्दैन । यो हो नि ।
तपाईंको भविष्य योजना के छ?
अन्तराष्ट्रिय फिल्म बनाउँदा पैसाको जोखिम छ । पैसा रिकभर हुने वा हुने होइन, पत्तो हुँदैन । तर, भुटानी फिल्म बनाउँदा लगानी उठ्ने सहजता छ । जसले गर्दा यही अनुसार अघि बढ्छु । मेरा केही फिल्म नेपालसहित केही विदेशी फिल्म फेस्टिभलमा पनि देखाइयो । यसबाट मैले पाठ सिकेँ । यत्तिको एक्सपोजर मेरा लागि महत्वपूर्ण हो ।